ကလေးငယ်များ၏လုံခြုံရေးအတွက် KeyLoggers ကိုအသုံးပြုပါ Gadget သတင်း
KeyLoggers ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လုံးဝအသစ်သောလုပ်ဆောင်မှုမဟုတ်ဘဲ၊ မတူညီသောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကြာမြင့်စွာကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သည့်အရာဖြစ်သည်။ အကြွေစေ့လိုပဲဒီ KeyLoggers တွေဟာ "နှစ်ဖက်စလုံး" ရှိနိုင်တယ်သူတို့ထဲကတစ်ခုကအပြုသဘော၊ နောက်တစ်ခုကအနုတ်ပဲ။
ဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောရလျှင်၊ ဆိုက်ဘာရာဇ ၀ တ်သားအမြောက်အများသည်မတူညီသောကွန်ပျူတာများတွင်တပ်ဆင်ရန်ဆော့ဖ်ဝဲအနည်းငယ်ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ အကောင့်အမျိုးမျိုး၏အထောက်အထားများကိုဖမ်းယူ (ခိုးယူ) e-mail နှင့်အကြွေးဝယ်ကဒ်အရေအတွက်သို့မဟုတ်၎င်းင်း၏သုံးစွဲသူများယေဘူယျအသုံးပြုသောအွန်လိုင်းဘဏ်များ၏အရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းမည့်အရာမှာ“ အပြုသဘောဆောင်ဘက်တွင်” လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်းလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာအချို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့်အကြံပြုရန်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကြောင်းခေါင်းစဉ်ထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါပြီ အကယ်၍ သင်သည်မိဘတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးအိမ်တွင်ကလေးရှိလျှင် ကွန်ပျူတာကိုနေ့စဉ်အလုပ်များတွင်အသုံးပြုရန်သင်စွန့်ခွာခဲ့ကြသူများကိုသင်က“ လမ်းပေါ်တွင်” လမ်းလွဲခြင်းမရှိဘဲသူတို့တစ် ဦး စီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အချိန်ကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းရှိ၊ မရှိကိုသင်သိရန်လိုကောင်းလိုပေမည်။ ဤ KeyLoggers များကိုလည်းရရှိနိုင်ရန်အနည်းငယ်ဖော်ပြသင့်သည် မည်သည့်အီလက်ထရောနစ်စတိုးတွင်မဆိုစက်ပစ္စည်းသေးသေးလေးတစ်ခု၊ သောယေဘုယျအားဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာ၏ကီးဘုတ်ချိတ်ဆက်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုမည့်အရာသည်သင်အသုံးပြုနိူင်သည့်သေးငယ်သည့် application များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဤ "ကောင်းမွန်သော KeyLoggers" အမျိုးအစားသို့ကျရောက်သည်။
1. အခမဲ့ Keylogger
၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်၊ အသုံးပြုမှုအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ ဒီ tool ကို download လုပ်ပြီးသူ့ရဲ့ interface ကိုမြင်နိုင်ဖို့ run ပါ။ ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် "CTRL + Shist + Alt + U" သင်မြင်နိုင်လိမ့်မည်။ သင် Windows ကိုအတူတကွစတင်နိုင်ရန်ဤ tool ကိုကူညီပါလိမ့်မည်။
သင်စောင့်ကြည့်လိုသည့်နေ့ကိုသာရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့မှသာကလေးငယ်များ (သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာပေါ်မှမည်သူမဆို) ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ရောက်လာသည်ကိုတစ်နေ့လုံးတွေ့မြင်နိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်မှာ၎င်းဖြစ်သည် ဒီအပလီကေးရှင်းသည်“ အသိပေးချက် tray” ၏inရိယာအတွင်းအိုင်ကွန်အသေးလေးတစ်ခုတင်သည်အခြေခံကွန်ပျူတာဗဟုသုတရှိသည့်မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမဆို၎င်းကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်၎င်းကိုနီးကပ်စွာပြုလုပ်နိုင်သည်
2. Free Keylogger refFOG
ဒီ tool မှာလည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ် ရေးသားထားသောအရာအားလုံးကိုလုံးဝစောင့်ကြည့်ပါ ဝင်းဒိုးကွန်ပျူတာ၏ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်; အခမဲ့နှင့်အခမဲ့ဗားရှင်းသည်မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကို ၀ င်ရောက်သည်၊ ဤပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများနှင့် (နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်မှုအချို့) အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အပလီကေးရှင်းများကိုသိရှိရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာကဒီ application ကိုဖြစ်ပါတယ် အသုံးပြုသူများကိုမမြင်ရသော ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲပစ္စုပ္ပန်နှင့်သူတို့၏အမြင်၌တည်လိမ့်မည်ထို့ကြောင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ပိတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းက။
3. DanuSoft အခမဲ့ Keylogger
ဒီ tool မှာငါတို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအခြားရွေးချယ်စရာများထက်အနည်းငယ်ပိုအဆင့်မြင့်သောအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူသည်၎င်းရောက်ရှိနေခြင်းကိုသတိမပြုမိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပထမလူ (တပ်ဆင်သူ) ရောက်ရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် Windows နှင့်အတူစတင်ရန် tool ကိုအချိန်ဇယားဆွဲပါ နှင့်မမြင်ရတဲ့။
ဤကိရိယာ၏ဖွဲ့စည်းပုံအတွင်းသင်ဤကိရိယာကိုမမြင်ရသောသို့မဟုတ်မြင်နိုင်စေမည့်စကားလုံးများကိုရေးနိုင်သည်။ ထို့နောက်သူကစတင်ပါလိမ့်မယ် တိုင်း keystroke ဖမ်းယူ, အရာနောက်ပိုင်းတွင်အဖွဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သေးငယ်တဲ့ဖိုင်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်လိမ့်မည်။
4. စစ်မှန်သောအခမဲ့ Keylogger
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤကိရိယာကိုအသုံးပြုရန်လည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူပြီးသားစကားဝှက်ကိုသတ်မှတ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ် ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏ interface ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်၎င်းအားထုတ်ပေးမည့်ဖိုင်ကိုကာကွယ်လိမ့်မည်။
စကားဝှက်ကိုမထည့် သ၍၊ ပရိုဂရမ်သည်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ရေးထားသမျှကိုဆက်လက်သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ထုတ်လုပ်လိုက်သောဖိုင်တွင် HTML format ရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာနှင့်ဤကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောလုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုမြင်သာစေသည်။
ဒီနေ့တောင်မှ keylogger တွေကိုအန္တရာယ်အဖြစ်စာရင်းသွင်းထားတယ် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဟက်ကာများမှလာလျှင်၊ သင်မသိသောကလေးငယ်များ၏လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်၎င်းတို့ထဲမှအနည်းဆုံးဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်လာရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်အဘို့မထိုက်တန်လုပ်ရပ်များအချို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Software များ » KeyLoggers: ၀ င်းဒိုးထဲမှာအသေးငယ်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုမလဲ
၅ Windows ကိုပိတ်ရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်စတင်ရန်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာများ